Obama oo qiray in la dilay hogaamiyaha Al-qaacida Sheeq Usama Bin ladin – SBC
Obama oo qiray in la dilay hogaamiyaha Al-qaacida Sheeq Usama Bin ladin
Madaxweynaha Mareykanka Brack Obama Ayaa xaqiiijiyay dhimashada Hogaamiyihii Ururka Alqaacida Sh Usama Bin landin, ka dib howlgal ay ka fuliyeen ciidamadooda duleedka xarunta wadanka Pakistan ee Islamabad.
Goobta uu dilka usama uu ka dhacay ayaa waxay 60 Km u jirtaa magaalada Islam abad ee xarunta dalkaasi Pakistan, waxaanu howlgalka lagu dilay soo jiitamayay tan iyo bishii August ee Sanadkii hore.
Obama ayaa sheegay in howlgalkan uu yimid ka dib mudo dheer oo ay baaritaano ugu jireen sidii ay u dili lahaayeen ama ay gacanta ugu soo dhigi la haayeen hogaamiyaha Ururka Alqaacida Sh Usama, oo uu sheegay in ay aamin sanyihiin in uu yahay ninka ka dambeya dhamaan falalka argagixiso ee ka dhaca Caalamka .
Dowlada Mareykanka ayaa horay ugu eedeysay Sh Usama Binlandin in uu ka dambeeyay falkii 11kii September 2011 ee dhulka lagu dhigay 2dii daarood ee ugu dheeraa aduunka taas oo dhalisay khasaare dhimasho kumanaan qof, iyo falal kale oo intii ka dambeysay ka dhacay caalamka .
Geeridu waa xap , qofkastana maalinti loo qoray waa dhimanayaa , laakin umaleyn maayo in maraykanku ku nasanayo dilka sh.osama bin ladin , maxaa yeelay, hadii xitaa isaga la dilay , lama dilin mana baabi,in fikirkiisii .
Marka waxba keeni mayso shakhsi la dilay , ilaahay khyrka hana waafajiyo .
Axmed SSC says:
hada waxaa hadhay oo kaliya in lasoo qabto axmed gudane si soomaaliya u dagto
waa run iney geeridu xaqtahay Sxb Sheegid Uma Baahna Ee Qofkasta Oo Muslim ama Gaal ah Wuu Ogyahay Iney Geeri Jirto,Balse Hadlka Is weydiinta Leh ayaa Ah Dunida Islaamka Muxuu ku soo kordhiyay Osama Tan iyo Inta Magaciisa Shaashadaha Caalmka Ka Soo Muqdeen , Balse Xaqiiqdu Hada Ma Noqoneyso Sb Sidaa U Sheegtay Mana Dhici Doonto Cid Dambe Oo Fikir Qaldan Diinta islaamka U Adeegsada Sharaf Xumo AYuuna Osama Ku riday Dhaman Islaamka Meelkasta oo ay duni Ka joogaan, dhamaan Umada Muslinka Maanta waxa ay u tahay maalin Farxad badan qyb wayn u geli doonto islaamnka iyo caalamka intiisa kale …. by Qalajis
walaahay waa layaab oo macqoolbaa bal ela eega walaalayaal
waa layaab in ladilay usaama walaahay waa layaab ilaahay ha una xariiso walaalkeen usaama